Cabdiramaan Cabdishakuur oo ka hadlay Dagaalka Guruceel | Dayniile.com
Home Warkii Cabdiramaan Cabdishakuur oo ka hadlay Dagaalka Guruceel
Musharax Madaxweyne Abdirahman Abdishakur Warsame Dagaalka ka socda magaalada Guriceel ee dawlad Goboleedka Galmudug wuxuu sababay, dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hanti. Nasiibdarro wayn ayey ahayd in daddaallo badan oo dagaal looga baaqsan karay oo aan qayb ka ahaa aysan guulaysanin.
Midnimada, wadajirka iyo jiritaanka Galmudug waa lama taabtaan. Si taas loo ilaaliyo waxaan ku baaqayaa
1- In degdeg dagaalka loo joojiyo, maydka la aaso, dhaawacana la daweeyo, dadka barakacayna guryahooda ku soo noqdaan.
2- in Ahlusunna aqbasho sharciyadda iyo hoggaanka hay’adaha dastuuriga ah ee Galmudug. Iyadoo la tixraacayo heshiiskii ay horay u galeen waa inay joojiyaan hubka ay ku qabsanayaan degaanno ay hore u joogeen ciidamada dawlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale waa inay joojiyaan ciidamada ay dib u yagleeleen iyo kala dhantaalka ay ku samaynayaan awooddii iyo ciidamadii Galmudug. Hankooda siyaasadeed waa inay waddo nabad ah ku raadiyaan, la dirirka Alshabaabna ay noqoto mid hoos timaadda, qaybna ka ah awoodda midaysan ee ciidamada Galmudug, saxna maha in jabhad hubaysan laga garab furo ciidamada Dawlad gobleedka Galmudug.
3. Dawladda Galmudug waa in ay nabadgelyo buuxda siisaa hoggaanka iyo xubnaha Ahlusunna, abuurtaana jawi iyo kalsooni cid kasta oo aan Al- shabaab ahayn ay si xorriyad leh hankooda siyaasadeed nabad ugu raadsan karaan , uguna baratami karaan si waafaqsan sharciyada iyo nidaamka ay reer Galmudug heshiiska ku yihiin.
Dhismaha dawladnimada dalkeena waa in si isku mid ah looga ilaaliyaa awoood hubaysan oo sharciyadda iyo dawladnimada la loollanta iyo awood dawladnimo oo dadka lagu caburiyo.
Previous articleRa’iisul wasaaraha XF Soomaaliya oo kormeer ku tegay dekedda Muqdisho
Next articleBeesha Caalamka oo war ka soo saartay Doorashada Puntlandada Puntlqnd
SHIRQOOL DOWLADEED IYO SHAATI SHABAAB! Ma jirin gaari qarax loogu xiray agaasime Abdiaziz Mohamud Guled hase yeeshee waxaa dilkiisa iska kaashaday NISA iyo Al-Shabaab. Abdiaziz oo...